Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Real Madrid oo iibineysa Eden Hazard, Chelsea oo Fasaxeysa Labo Xidig, Xaalka Kylian Mbappe, iyo Qodobo kale | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Real Madrid oo iibineysa Eden Hazard, Chelsea...
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Real Madrid oo iibineysa Eden Hazard, Chelsea oo Fasaxeysa Labo Xidig, Xaalka Kylian Mbappe, iyo Qodobo kale
Paris St-Germain ayaa isku dayi doonta inay la soo saxiixato weeraryahanka reer Brazil Richarlison, oo 24 jir ah, haddii ay ogolaadaan heshiis ay Real Madrid kaga iibinayaan Kylian Mbappe oo 22 jir ah. (Sky Sports)
Everton ayaa dalbaneysa 85 milyan oo ginni ciyaaryahankii hore ee Watford Richarlison. (DailyStar)
PSG ayaa bartilmaameedsan doonta weeraryahanka Manchester City ee reer Brazil Gabriel Jesus, oo 24 jir ah, haddii Mbappe baxo. ()
Weeraryahanka Borussia Dortmund ee reer Norway Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, waa mid kale oo diirada u saaran PSG haddii Mbappe u dhaqaaqo caasimada Spain. (DailyStar)
Real Madrid ayaa dooneysa inay iska iibiso 30-jirka garabka ka ciyaara ee reer Belgium Eden Hazard, weeraryahanka Spain Marco Asensio, 25-jir, ama weeraryahanka reer Brazil Rodrygo, 20-jir, iyagoo isku diyaarinaya imaatinka Mbappe. (Goal)
Juventus ayaa xiiseyneysa Hazard si ay ugu bedesho 36 jirka reer Portugal Cristiano Ronaldo, kaasoo ku biiray Manchester United. (Marca)
Weeraryahanka reer Uruguay ee Manchester United Edinson Cavani, oo 34 jir ah, ayaa “weli aad ugu badan qorshayaasha United xilli ciyaareedkan” mana jirto “qorshe lagu iibinayo” ka dib imaatinka Ronaldo. (Goal)
Tababarihii hore ee Man United Sir Alex Ferguson ayaa kaalin weyn ka qaatay sidii uu Ronaldo ugu tijaabin lahaa Old Trafford 12 sano kadib markii uu tagay Real Madrid. (Mirror)
U dhaqaaqistii Chelsea ee ciyaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez ayaa burburay ka dib markii 26 jirkaan uusan damaanad qaadin waqtiga ciyaarta caadiga ah ee tababaraha Blues Thomas Tuchel. (90 Min)
Heshiiskii Kurt Zouma ee £ 25m ee uu West Ham uga soo wareegay Chelsea ayaa dheelitirnaan ku jira ka dib markii ay dhibaato kala kulmeen caafimaadka 26 jirka reer France. (Mirror)
Sevilla ayaa sheegtay in Chelsea ay ka dhamaaneyso waqtigeedii saxiixa daafaca reer France Jules Kounde, oo 22 jir ah, kaasoo qandaraaskiisa lagu burburin karo 77.1 milyan ginni. Blues ayaa xiiseyneysa saxiixa laacibkii hore ee Bordeaux. (FootballEspana)
Chelsea ayaa laga yaabaa inay iska iibiso labada xiddig ee khadka dhexe ee England Ross Barkley, 27, iyo Danny Drinkwater, 31, si ay meesha uga saaraan mushaharka ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Talaadada soo socota. (Thesun)
Chelsea ayaa heshiis cusub oo afar sano ah la gaartay daafaca Denmark Andreas Christensen, iyadoo heshiiska 25 jirka uu ku jiro ikhtiyaar sanad kale ah. (Goal)
Aston Villa ayaa xiiseyneysa inay la soo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Belgium Axel Witsel oo 32 jir ah (Tuttosport)
Arsenal ciyaaryahanadeeda khadka dhexe Miguel Azeez, 18, iyo Ryan Alebiosu, 19, kaas oo ka ciyaari kara daafaca midig ama khadka dhexe, ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Portsmouth iyo Sunderland siday u kala horreeyaan. (Football.london)
Previous articleDeg Deg Dorashada Somalia Oo Laga Heshiiyey, Muuse Biixi Oo Ka Farxiyey Malatariga S/Land
Next articleDENI oo kulamo xasaasi ah ka wada Nairobi + Ujeedka